Tsy azo ekena ho an'i Thailand izao ny fianteherana amin'ny fizahantany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Tsy azo ekena ho an'i Thailand izao ny fianteherana amin'ny fizahantany
Desambra 20, 2020
Amazing Thailand no teny filamatra ho an'ny indostrian'ny mpitsidika ilay Fanjakana nandritra ny taona maro izay nitondrana vola mitentina 56.2 tapitrisa dolara amin'ny vola miditra amin'ny fizahantany tamin'ny taon-dasa fotsiny. Ny tsiky Thai, ny sakafo Thai dia lasa varotra ho an'i Thailand manerantany.
Araka ny kabarin'ny minisitry ny governemanta Thai dia mazava fa tsy avela hiverina amin'ny sehatra teo aloha intsony ny fizahantany. Mazava ho azy fa eo amin'ny rindrina sy ny varavarankely ary ny vavahady ny fanoratana fa nisy fiovana lehibe teo amin'ny fisainan'ny governemanta nataon'ny kabinetran'ny PM Prayut Chan-o-cha.
Tao anatin'ny fivoarana iray mampiahiahy ho an'ny indostrian'ny Travel & fizahan-tany any Thailandy, izay mitentina 20 isan-jaton'ny GNP ary 10 isanjaton'ny asa rehetra any Thailandy, ny praiminisitra lefitra Supattanapong Punmeechaow dia nilaza fa miankina betsaka amin'ny fizahan-tany ny firenena ary izany dia tsy azo ekena.
Ity dia tsy maintsy mampatahotra ho an'ny mpamorona trano sy ny mpampiasa vola. Raha ireo mpizahatany 39 tapitrisa voarain'i Thailand tamin'ny taon-dasa tamin'ny 2019, dia tsy haverina intsony, maninona no mila manohy manangana sy manao investissement amin'ny hotely vaovao isika?
Araka ny filazan'ny gazety Thailandey Nation, ny lefitra PM Supattanapong Punmeechaow dia nanaiky fa ny fihanaky ny Covid-19 dia nampiharihary vaky sy lesoka teo amin'ny toekarena Thai.
"Ny fihanaky ny Covid-19 izay namely an'i Thailand hatramin'ny volana aprily dia nampiharihary ny halemem-bolan'ny toe-karena ary nampiharihary ny zava-misy fa miankina betsaka amin'ny fanondranana sy ny fizahan-tany izahay," hoy ny minisitra.
Azo antoka fa fialàna tamin'ny nolazain'ny Minisitra tamin'ny volana Aogositra io. Ny praiminisitra lefitra, izay mitazona ny portfolio Energy dia nanambara avy eo ny fananganana tontonana ara-toekarena vaovao, ary nirehareha fa hampiakatra ny fizahan-tany sy ny asa ny komity ara-toekarena vaovao. Nilaza izy fa nanaiky ny hampiakatra fanampiana ho an'ireo mpizahatany ao an-toerana ny tontonana ary hamorona asa 1 tapitrisa atsy ho atsy hiadiana amin'ny tsy fananan'asa.
Tsy manahy i Supattanapong Punmeechaow ny lefitry ny lefitra PM amin'ny fametrahana atody be loatra ao anaty harona iray ary hanaparitaka ny loza mety hitranga. Na izany aza, angamba aloha loatra ny manomboka mandeha lavitra ny fizahan-tany rehefa tsotra ny indostria hafa ary tsy vonona handray ilay kamo. Fanatsarana ny fotodrafitrasa; ny fanavaozana ara-dalàna, ny fanovana ny lalàna mifehy ny fananana orinasa ary ny fihenan'ny asa birao dia vitsivitsy monja amin'ireo fanovana nangatahan'ny efitrano fivarotana ary tsy maintsy apetraka talohan'ny nanombohanay nahandro ny gisa nametraka volamena volamena teo amin'ny gorodon'ny vault ao amin'ny banky.
Ny praiminisitra lefitra izay niteny tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny lahatenin'ny fiaraha-misakafo "Restart Thailand 2021" natao tao amin'ny toeram-pivarotana Siam Paragon any Bangkok dia nilaza fa, "Nisy fiatraikany lehibe teo amin'ireo orinasa madinidinika sy antonony io valanaretina io, nahatonga ny governemanta handany Bt 800 miliara amin'ny fepetra fanampiana SME ao anatin'izany ny fanemorana ny fandoavana trosa mihoatra ny Bt 6.8 trillion ho an'ny SME 12 tapitrisa, ”hoy izy. “Na izany aza, nanomboka ny volana jolay ho avy izao, ny tondro ara-toekarena dia nanondro fironana hanatsara hatrany noho ny fiaraha-miasa amin'ny ankolafy rehetra amin'ny fisorohana ny valanaretina, na eo aza ny fiatraikany kely amin'ny toe-javatra politika.
"Ny indostrian'ny fizahantany dia nampiseho fanatsarana, miaraka amina asa 30 isan-jato, mitsambikina avy amin'ny 6 isan-jato fotsiny tamin'ny volana aprily, noho ny fanentanana ara-toekarena nataon'ny governemanta toy ny fanampiana ara-barotra" Let's Go Halves ", hoy ihany izy.
“Amin'ny alàlan'ny Thai Credit Guarantee Corporation, ny governemanta dia mikasa ihany koa ny hanome indram-bola Bt 150 miliara fanampiny hanampiana ireo orinasa kely sy salantsalany.
“Mbola tsy vita ny ady atao amin'ny Covid-19. Mbola manana tetik'asa maro ny governemanta amin'ny taona ho avy hampisondrotra ny toekarena, hisarihana ireo mpampiasa vola vahiny ary hanangana fotodrafitrasa ho fanitarana amin'ny ho avy, "hoy ihany ny minisitra.
“Anisan'ireto tetik'asa ireto ny fananganana tsipika Skytrain 14 any Bangkok izay mahatratra 500 kilometatra ao anatin'ny efatra ka hatramin'ny dimy taona ho avy, lehibe kokoa noho ny London Underground, ary ireo tetik'asa momba ny fotodrafitrasa ao amin'ny East Economic Corridor hanohanana ny teknolojia nomerika, ny 5G ary ny indostrian'ny robotika.
“Izany dia tsy azo ekena hamela an'i Thailand hilona hiverina amin'ny vanim-potoana alohan'ny Covid-19. Koa satria miova ny toekarena manerantany dia tokony ho mavitrika kokoa amin'ny fisintomana ireo mpampiasa vola vahiny isika, ary ny maso ivoho tompon'andraikitra amin'izany dia ny Biraon'ny Biraon'ny Fampiasam-bola sy ny Biraon'ny Ara-toekarena Atsinanana, "hoy i Supattanapong.
"Ny dingana manaraka dia ny fametrahana an'i Thailand ao amin'ny lisitry ny firenena 10 ambony amin'ny alàlan'ny fanamorana ny asa aman-draharaha, izay tanjona naroson'ny firenena dimy izay mpiara-miombon'antoka lehibe aminay."
2021 no taona fampiasam-bola
Nanazava ihany koa ny lefitra PM fa amin'ny taona ho avy dia hifantoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny indostria vaovao ny governemanta izay hanampy amin'ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ny fanondranana sy fizahan-tany. "Bangkok no ho ivon'ny biraom-paritra misy orinasa iraisam-pirenena, raha ny indostrian'ny fiara any Thailand kosa dia hifantoka amin'ny famokarana fiara elektrika (EV)," hoy izy. "Ny EV dia hamorona indostria hafa mifandraika amin'izany toy ny fanamboarana fitaovana marani-tsaina sy ny herinaratra vokarina amin'ny angovo azo havaozina. Izany dia hiteraka fotoana lehibe hampiasa vola any Thailand amin'ny famokarana herinaratra ho an'ny vondrom-piarahamonina, ary koa ny tobin-jiro biomassa sy ny herin'ny masoandro any Laos, "hoy izy namarana.